Chikafu cheScardale - Zvese zvaunoda Kuti Uzive !! | Kudya kweNutri
Kudya kweScardale imhando yechikafu chinotetepa chinozivikanwa ne kuonda nekukurumidza zvakanyanya, nekuda kwekutora koriori mashoma. Icho chimwe chezvekudya zvekare kubva zvawakagadzirwa uye kugadzirirwa ne Chiremba Herman Tarnower muna 1970 uye yakaburitswa muna 1978. Zvisinei uye kunyangwe paine makore, ichiripo kugamuchirwa kwakawanda nevanhu avo vanosarudza kurasikirwa nehuremu munguva pfupi.
Kudya kweScardale kunoenderana nepfungwa yekubatanidza mapuroteni, makabhohaidhiretsi nemafuta, mune zvinotevera zviyero mukudya kwezuva ripi neripi rakapihwa: 43% protein, 22,5% mafuta uye 34,5% makabhohaidhiretsi. Mumakore 70 uye 80 Kudya uku kwakagamuchirwa zvakanyanya neruzhinji, nekuda kwenjodzi dzakabatanidzwa mukutevera kudya kweprotein kwakanyanya vakanga vasingazivikanwi zvachose.
Nanhasi hazvikurudzirwe kutevera chikafu chine mapuroteni, nekuda kwekukuvara kunogona tambura neitsvo uye mukana wekukudziridza chakadai chirwere chepfupa se osteoporosis. Kunyangwe muma70s, nekuda kwekukanganisika kwenguva yakareba, vezvehutano vakakurudzira kusavatevera anopfuura mavhiki maviri akateedzana.
Zvinoenderana nezvigadziko zvekudya uku, munhu anosarudza kuzviita anogona kurasikirwa anenge 400 magiramu pazuva. Kune matatu chete kudya pazuva, kubvisa masikati uye chikafu. Hwaro hwechikafu ichi chine michero, miriwo uye nyama yakaonda. Kuva chikafu yakakwira kwazvo mumapuroteni, munhu anoguta chose uye kashoma kuti asare aine nzara. Dambudziko guru nedhayeti iyi uye sezvazvinowanzoitika mune dzakawanda zvinonzi zvishamiso zvekudya ndizvo kurambidza kudya kwakawanda izvo zvinodikanwa pakukudziridzwa kwakakodzera kwemuviri.
Humwe hunhu hwechikafu cheScardale ndechekuti inokurudzira kunwa zvirinani anenge magirazi mana emvura pazuva Kunyangwe pasina muganho uye chinhu chakakurudzirwa chingave magirazi masere kana marita maviri emvura. Kudya kwemvura kunobatsira kwazvo muviri sezvo kuchibatsira kubvisa chepfu uye kurasikirwa kwemafuta akaunganidzwa.
1 Scardale yekudya mhando mhando
2 Kurambidzwa uye kubvumidzwa chikafu mune Scardale chikafu
3 Makomborero echikafu cheScardale
4 Kukanganisa kwekudya kweScardale
5 Vhidhiyo nezve iyo Scardale kudya
Scardale yekudya mhando mhando
Tevere ini ndinokuratidza zvazvingave zvakajairika zuva nezuva menyu pane iyo Scardale chikafu. Sezvandambotaura kare mumhando iyi yekudya pane chete Kudya katatu pazuva: Kudya kwemangwanani, masikati uye kudya kwemanheru.
Kudya kwemangwanani kwaizosanganisira hafu yechibereko kana chimwe chibereko chemwaka, chidimbu chechingwa chegorosi chisina chinhu uye kofi kana tii pasina chero shuga.
Mune chikafu chaunogona kutora imwe huku yakakangwa pamwe nesaradhi yakapfekwa nepuniki yemafuta emuorivhi. Unogona kuva nechimedu chemuchero 4 nguva pasvondo.
Panyaya yekudya kwemanheru, unogona kusarudza hove isina mafuta akawanda, mamwe miriwo yakabikwa kana yakabikwa uye uende navo nepuniki yamafuta omuorivhi.
Kurambidzwa uye kubvumidzwa chikafu mune Scardale chikafu
Kuti zvijekese zvishoma kwauri izvo zvinodyiwa neScardale, ini ndinonyora pazasi zvavari chikafu chinorambidzwa kana kuti iwe haugone kutora mune chero zvazvingava uye izvo zvaunogona kudya pasina matambudziko uye izvo zvinotenderwa.
Zvikafu zvinorambidzwa kudya kweScardale ndeavo vanobva yakakwira starch yezvinhu senge mbatatisi, zvekudya zvine mafuta akawedzerwa akadai setirairi kana kirimu, zvigadzirwa zvakawanda zvemukaka, majusi emichero, doro, zviwitsi kana zvigadzirwa zvekudyira.
Kana zvakadaro chikafu chinotenderwa Uye kuti iwe unogona kupinza mukudya pasina dambudziko, kune miriwo yakadai semakarotsi, magaka, matomatisi, sipinashi kana broccoli. Unogona kushandisa zvinotapira pachinzvimbo cheshuga nevhiniga kana zvinonhuwira zvinogona kuiswa mumadhirezi. Nezve kudya kweprotein, unogona kuva nenyama kana hove asi inofanirwa kunge iri pasina mafuta.
Makomborero echikafu cheScardale
Zvishamiso zvekudya zvinowanzove nazvo Zvakanaka uye zvakaipa zvinhu uye vanhu vanovadzivirira uye vamwe vanovashora, zvakafanana zvichaitika nechikafu cheScardale. Saka kuti iwe uve neruzivo zvizere usati watanga iyo Scardale yekudya, pazasi ini ndichaenda kutaura nezve zvakateedzana zvezvakanakira kana mabhenefiti ayo anotevera rudzi urwu rwechikafu anogona kukuunzira iwe.
Icho chikafu chauchazowana zvibereko zvakanaka munguva pfupi. Kana iwe uchida kudzikira uremu nekukurumidza, chikafu chakakwana chekutevera.
Nekusanganisira chikafu chakagadzirwa neakateedzana ezvimwe zvekudya, Haufanire kupenga uchiverenga macalorie echinhu chimwe nechimwe kana kuona kuti chikafu chaunodya chinorema zvakadii.
Izvo hazvidi kuti zviwedzerwe nechero ipi mhando yekurovedza muviri kana chiitiko chemuviriKana iwe ukatevera iwo marongero akaisirwa nechikafu, iwe ucharasikirwa neiyo kilos iwe yawakaisa.
Kukanganisa kwekudya kweScardale
Sezvinowanzoitika nerudzi urwu rwekudya, chikafu icho chauri kuzotevera haina kuenzana zvachose uye muviri haugamuchire zvese zvinovaka muviri zvaunoda kuti ushande zvakakwana.
Kudya kwemangwanani haipe zvinovaka muviri zvakakwana kana simba rekutanga zuva.
Zvinosanganisira kudya katatu chete pazuva, unogona kusangana pane imwe nguva masikati kushaya simba, kumwe kushaya simba kana vane nzara.
Sekureva kwevamwe nyanzvi dzekudya, chikafu ichi hachifanirwe kuwedzerwa kwenguva yakareba nekuti chinogona kukonzera matambudziko akakomba ehutano se yakawedzera uric acid kana kupera mvura mumuviri. Pamusoro peizvi, itsvo inogona kukuvara zvakanyanya kana kukuvara.
Kunyangwe kurovedza muviri kuri hutano kumuviri, hazvikurudzirwe, nekuda kwe kushaya zvinovaka muviri uye kumakoriori mashoma akadyiwa muswere wese wezuva.
Kana iwe ukasarudza kutanga iyo Scardale yekudya zvakakosha kuti zvisati zvaitika bvunza chiremba wemhuri yako kukuyambira kana ichigona kuunza chero njodzi kune hutano hwako.
Vhidhiyo nezve iyo Scardale kudya
Ndobva ndakusiya vhidhiyo inotsanangura nezve chikafu cheScardale kuti iwe ugone kudzidza zvishoma nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Kudya kweScardale
Zvinhu zvitatu zvekuchengeta mupfungwa usati wadzora sunbathing